Channable: Fudza Zvigadzirwa Zvako Kumutengo Kuenzanisa Webhusaiti, Inobatana, Musika Misika, uye Ad Networks | Martech Zone
Kusvikira vateereri kwavari ndeimwe yemikana mikuru yeiyi nzira yekutengesa yedhijitari. Kunyangwe iwe uri kutengesa chigadzirwa kana sevhisi, kutsikisa chinyorwa, kubatanidza podcast, kana kugovana vhidhiyo - kuisirwa izvo zvinhu uko kune vanobatanidzwa, vateereri vanokodzera vakakosha kubhizimusi rako 'kubudirira. Ndicho chikonzero nei papuratifomu yega yega iine mushandisi mushandisi uye muchina-unoverengwa interface.
Tichitarisa kumashure kune rino gore, kukiyiwa kwakashandura kushambadzira uye ecommerce kumusoro. Rob Van Nuenen, CEO weChannable uye e-commerce nyanzvi, inopa inotevera maonero pamusoro pekukanganisa:
Zvidhinha nemadhishi zvakavhura shopu kana vaisave neinternet pamberi. Chishamiso ndechekuti kumhanya kwakadii zvitoro zvidiki zvakabuda uye varidzi vacho vaive - vachangopfuura vasingashande kana vasingashande vatengesi vanogadzira zvitoro zvezvinodiwa-zvigadzirwa kuti vakwanise kuchengeta muhoro uchiuya.
Zvitoro zvepamhepo zviri kusiyanisa migero mavanotengesa - pasi rose
COVID yaive yekumuka-yekufona kutengesa munharaunda - uye ikozvino inoonekwa seyakakodzera chiteshi
Nzira dzepamhepo senge Google ZVINOKOSHA pakutsigira nharaunda yemunharaunda nekuchengeta vatengi munharaunda
Nzvimbo yake, Inogadziriswa, inotungamira yepasirese e-commerce chikuva iyo inopa vashambadzi vemadhijitari, zvigadzirwa, uye vatengesi vepamhepo kukunda matambudziko aya nemikana.
Chii chinonzi Chigadzirwa Kudya?
Chigadzirwa chinodyiwa idhijitari faira rine tambo yeinodzidzisa dhata yezvakawanda zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvekushandisa zvinogona kushandiswa kubatanidza dhata mune chaiyo-nguva kubva kune yako ecommerce kana yeplatifomu chikuva kunze kune mamwe masisitimu - kusanganisira vanobatana manejimendi, email kushambadzira mapuratifomu, zvemagariro midhiya, ecommerce mapuratifomu, uye / kana kushambadzira manejimendi mapuratifomu.
Channable: Tengesa Zvigadzirwa Zvako Kwese Kwese
Inogadziriswa inopa chishandiso chepamhepo chevamiririri vekutengesa nevatengesi vepamhepo kutumira zvigadzirwa zvavo kana masevhisi kumisika dzakasiyana siyana, injini dzekuenzanisa, uye mapuratifomu ehukama. Nechannable, mabhizinesi anogona kusefa zviri nyore, kuzadza, uye kukwidziridza ruzivo rwechigadzirwa kuti vawane mhedzisiro iri nani. Ipuratifomu ipapo inotumira iyo yakagadziridzwa ruzivo kune chero nzira yekutumira yavanosarudza (semuenzaniso Amazon, Shopping.com, kana Google).
Channable Feed Management Zvimiro Sanganisira
Nyore chigadzirwa chigadzirwa - Yekushandisa manejimendi manejimendi inokutendera kuti uronge zvigadzirwa zvako kuitira kuti uenzane nezvikamu zvechiteshi chekutengesa. Ne Channable, iwe unogona ipapo ipapo kugadzira zvikamu nekushandisa smart kupatsanura kwevamwe vanozivikanwa kwazvo ekushambadzira mapuratifomu. Maitiro aya anogona kukurumidza kumisikidza kumisikidzwa kwechikafu chitsva, kuwedzera kuona kwako pane chiteshi, uye kuwedzera kusvika kwako.
Inesimba kana-ipapo-mitemo - Kazhinji, iwe ungazoda wekuvandudza kuti uvandudze chigadzirwa chako chikafu. Nerutsigiro rwechishandiso chekushandisa chekushandisa, zvirinyore kana-zvadaro-mitemo ichikubvumidza iwe 'kodhi' iwe pachako. Iyi mitemo inozoiswawo kune zvigadzirwa zvitsva zvinowedzerwa kuchitoro chako chepamhepo. Iwe unogona chaizvo kudzora kuyerera kwezvigadzirwa kune yega yega yekutengesa chiteshi uye kugadzirisa ruzivo panguva imwe chete. Chishandiso cheakanaka manejimendi manejimendi chinokupa iwe nekukurumidza mhinduro mushure mekunge wega mutemo washandiswa kune yako chigadzirwa katalog.
Yakakwira-mhando dhata inopa - Kuburitsa mhando yepamusoro, zvine hutano dhata dhata zvinobva zvawedzera kuwoneka kwako kwepamhepo. Muzhinji, iwe unofanirwa kufananidza iyo 'minda' ine ruzivo rwechigadzirwa mune yako yekudyisa feed kune inodiwa 'minda' yeyaunoda kutumira kunze feed. Chishandiso manejimendi manejimendi inoziva ese mafekitori maratidziro ayo akabatanidzwa makwara uye inogara kumusoro-kune-kudhara neshanduko uye kugadzirisa.
Feeds & APIs - Nemaoko kuverengera kuti iro rinotumirwa kunze ruzivo rwechigadzirwa, senge stock, rinogara rakarurama rinogona kutora yakawanda nguva yako. Mimwe misika inopa API kubatana kune yako online shopu iyo inogonesa otomatiki, inoramba ichichinjana ruzivo pakati pemapuratifomu maviri. Zvekushandisa manejimendi maturusi anogona kuendesa yako feed data nguva nenguva kuti uve nechokwadi chekuti chako chigadzirwa zvinyorwa uye yako backend ruzivo zvinowirirana neyako ekisheni chiteshi.
Channable parizvino inotengeswa kubva kuLightspeed, Shopify, ecManager, Magento, CCVShop, Divide.ZVINO, WooCommerce, Mijnwebwinkel, inRiver, PrestaShop, Shopware, BigCommerce, nezvimwe. Channable zvinopihwa Kupfuura 2500 kuenzanisa kwemitengo mawebhusaiti, akabatana netiweki, uye misika yekutumira kune.
Saina Kumusoro Kuti Channable
Tags: ad manejimendi chigadzirwa chikafuchakabatana chigadzirwa chikafuamazon chigadzirwa chikafuCCVShopchannableChannelsCOVID-19GovanisaiecManagerecommerceecommerce chikafuecommerce chigadzirwa chikafuemail kushambadzira chigadzirwa chikafufeed managementgoogleinrivermwenjeMagentoMijnwebwinkelppc chigadzirwa chikafuPrestashopchigadzirwa chikafuchigadzirwa chikafu manejimendiRob Van NuenenshopifyZvitoropasocial media chigadzirwa chikafukutengesa munharaundawoocommerce